Misoko mangina ny valanaretina: dimy ireo lavon’ny covid-19… | NewsMada
Misoko mangina ny valanaretina: dimy ireo lavon’ny covid-19…
Misoko mangina. Niampy dimy indray ireo namoy ny ainy noho ny valanaretina. Notsaboina teto Analamanga ny roa raha iray avy kosa ireo maty tany Vakinankaratra sy Analanjirofo ary Boeny. Mananika ny 123 izany izao ireo lavon’ny cvid-19.
Niampy 235 kosa ireo nifindran’ny covid-19 ka mbola ivony ny eto Analamanga, tranga vaovao 185. Miisa 17 ny any Bongolava raha 16 ny any Matsiatra Ambony. Telo avy ireo nifindran’ny valanaretina any Sofia sy Atsimo Andrefana. Roa avy ny any Boeny sy Anosy. Ahitana tranga vaovao iray avy ny any Atsinanana, Vakinankaratra, Itasy, Diana. Misy telo hafa tsy voafaritra ny toerana misy azy ireo.
Miisa 79 kosa ireo « formes graves » ka avy eto Analamanga ny 61. Fito ny any Boeny raha enina any Matsiatra Ambony. Efatra ny any Atsimo Andrefana ary iray any Vakinankaratra.
Miisa 461 kosa ireo olona sitrana ka tafakatra 9 286 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho an’ny fahasitranana raha 2 486 ireo mbola manaraka fitsaboana. Miisa 11 893 kosa ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.